Kadib Dhaawicii Neymar Waa Kuma Xidiga Kale Ee Ugu Halista Badan PSG.
Home Horyaalka France Kadib dhaawicii Neymar waa kuma xidiga kale ee ugu halista badan PSG.
PSG ayaa kulan weyn ku leh Camp Nou salaasada Tan iyo markii la shaaciyay inay wajihi doonaan Barca, kooxda Parisi ayaa horay u fiirineysay kulanka.
Kooxdaan Barca ma ahan Barca xilli ciyaareedyadii hore kooxda reer France ayaa doonaya inay ka faa’ideystaan difaacyadooda Si kastaba ha noqotee, waxay noqon doonaan la’aanta xidigahooda ugu weynaa teamka marka laga hadlo neymar oo hore loo xaqiijiyey halka di maria uu isna seegi doono.
Booska maalmo yar gudahood, Pochettino waxaa lumiyey Di Maria iyo Neymar. Xiddiga reer Argentine ayaa dhaawac muruqa ah ka soo gaadhay Marseille halka xiddiga reer Brazil uu dhaawac ka soo gaadhay muruqyada.
Tani waxay ka dhigeysaa Mbappe inuu yahay ninka ugu dambeeya ee hor taagan Ninkii hore ee Monaco ayaa kaligiis ah marka laga hadlayo qatarta waana inuu hubiyaa in kooxdiisu aysan garaacin Barca. Ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, weeraryahanku wuxuu dhaliyay 18 gool wuxuuna helay sagaal caawin 27 kulan oo uu saftay.
Waa la arki doonaa inuu tababaruhu nasiin doono iyo Nice Sabtidan. Tani waxay u badan tahay inay dhacdo maadaama ay qatar weyn u tahay in la ciyaaro. Ciyaarta Talaadada ayaa fursad qaali ah u ah lambarka ‘7’, kaasoo weli ah bartilmaameedka koowaad ee Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda.
Previous articleTababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo isha ku haya inuu lasoo saxiixdo Raphael Varane
Next articleMikel Arteta oo sheegay inuusan mardambe baraha bulshada uusan soo dhigin doonin wax ku saabsan isaga iyo Kooxdiisa kadib cunsuriyad lagula kacay.